Fanamarihana sy famerenana ny fandrehitra afo avy amin'i Jack London - Ikkaro
firosoana >> boky >> Mandrehitra afo avy amin'i Jack London
Nohararaotiko ny fandalovan'i Filomena namakivaky ny saikinosy sy ny fiakaran'ny maripana marobe hamerenako azy Mandrehitra afo nataon'i Jack London.
Tahaka ny Tononkalo Ithaca tantara kely nofonosina fanontana izy io
Tamin'ity indray mitoraka ity dia ny andiany izay novidiko Fanjakana Cordelia miaraka izany sary nataon'i Raúl Arias ary fandikan'i Susana Carral. Ity fanontana ity dia misy koa ny tantara roa an'ny Lighting a Bonfire izay nosoratan'i Jack London. Ny 1907 izay iray fantatry ny rehetra ary ifotoran'ny sary ao amin'ny boky sy ny 1902 e izay ampidirina ho annex ary izay no kinova voalohany nosoratany ho an'ny magazine literatiora. Mpanaradia ny tanora.
Azonao atao mividy azy izao amin'ny € 7
Ireo fandikan-teny dia mifototra amin'ny asa napetraky ny Stanford University ao aminy Fanontana Canonical an'ny tantaran'i Jack London.
Tamin'ny 1907 dia natolony azy indray ho an'ny Gazety Century ary tamin'ny 1910 dia natambatra tao amin'ny volan'ny Lost Face izy.
Ireo fanoharana ny Raul Arias Efa hitako izy ireo tao amin'ny fanontana ny trano fanontana King Learn amin'ny fonosana mafy sy lehibe kokoa. Ity dia volavola iray izay noraisiko tao amin'ny tranombokim-panjakana tamin'ny fotoana voalohany namakiako azy. Aorian'io dia hitako ny kinova Reino de Cordelia izay nividianako farany.
Amin'ny fomba iray dia mampatsiahy ahy ny fanoharana nataon'i Agustín Comotto izy ireo Ligy 20.000 XNUMX an'ny dia anaty rano, Ny boky tian'i Verne hatreto.
Tantara iray vakiana amin'ny fotoam-pivoriana iray izany, amin'ny andro ririnina mangatsiaka. Ity dia tantara mahatalanjona sy mahery vaika izay mahatonga anao hametraka ny kirarok'ilay mpilalao sarimihetsika ary hitanao ny fijaliany, ny fijaliany. Hita taratra amin'ny hamafin'ny asan'ireo toerana tsy azo ihodivirana ireo. Ny natiora any an'ala sy ny halehiben'ny olona tsy manan-kialofana.
Ilay kinova 1907 dia toa ambony noho ny ahy amin'ny lafiny rehetra. Ny tsy fisian'ny fifanakalozan-kevitra ary ny eritreritr'ilay maherifo ihany no hitanao fa mahatonga anao hiroboka ao amin'ilay tantara. Ny fisehoan'ilay alika miaraka aminy mandritra ny dia dia toa loharanom-pahalalana mahafinaritra amiko ary iray tsy hita rehefa vakianao ny kinova voalohany.
Fomba tsara hanombohana mamaky an'i Londres. Ity asa ity dia misy fitoviana lehibe amin'ny Ny fiantsoan'ny bibidia y Volo fotsy. Sanganasa iray hafa nataon'ny mpanoratra novakiako taona maro lasa izay ary tiako hananana ny Ilay mirenireny kintana.
Tamin'ny faha-21 taonany dia nandeha nankany Alaska i London mba hitady volamena, hahatsapa ary miaina ny hatsiaka eo amoron'ny Klondike. Niaina ny hatsiaka mahery tamin'ny olona voalohany izy, namakivaky ireo ala ireo ary ireo traikefa rehetra ireo dia natao pirinty tamin'ity tantara ity.
Zavatra hafahafa sasany nangonina tao amin'ilay boky.
Avy amin'ny 45ºC ambanin'ny zero dia ilaina ny mandeha miaraka amin'olona
Mampiasa tinder vita amin'ny hodi-kazo izy ireo. Mila mikaroka momba an'io lohahevitra io aho.
Zava-misy mahaliana kokoa
Ny mari-pana amin'ny rivotra ambany indrindra voarakitra tobin'ny toetr'andro dia -89,2C. Noraisim-peo tao Russia tany Antarctica Atsinanana, tao amin'ny toby Vostok (Source National Geographic). Saingy tamin'ny fanadihadiana tamin'ny taona 2018 tao amin'ny Geophysical REsearch Letters (Temperature ambonin'ny Ultralow any Antartika Atsinanana Avy amin'ny Sarintany tsy misy hafanana amin'ny satelika: toerana mangatsiaka indrindra eto an-tany) mpahay siansa mamakafaka ny angona zanabolana dia nahita mari-pana -90ºC
Paladia mpampivelona (mpitsabo aretin-tsaina Alytes)
1 Ny fanontana
2 Ny asa
4 Zava-misy mahaliana kokoa